Tableau ကဘာလဲ? အဘယ်ကြောင့် Tableau ကိုအကောင်းဆုံး Virtualization Software များဖြစ်ပါတယ်
အဘယ်ကြောင့် Tableau မြန်နှုန်း Market ကမှ
Big Data မ
တုန်လှုပ်ဖွယ်, interactive Visual
ဒေတာများကို Visual အတွက်ကူညီပေးသည်ရာ2အများစုမှာအရေးကြီး Tableau လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများနှင့်လက်မှတ်
Tableau Desktop ကိုအခြေခံစည်းမျဉ်းပစ်မှတ်ပရိသတ်
2 ။ Tableau Desktop ကိုအဆင့်မြင့်သင်တန်း & လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
Tableau Desktop ကိုအဆင့်မြင့်ပစ်မှတ်ပရိသတ်
Tableau Desktop ကိုအဆင့်မြင့်အဘို့အ Preqisite
Tableau Tableau Software ကလုပ်မှတ်သားလောက် data တွေကိုအမြင် software ဖြစ်ပါသည်။ Tableau နီးပါးမည်သည့်ဒေတာအရင်းအမြစ်မှမစိုက်ဆက်စပ်, ကော်ပိုရိတ်ဒေတာသိုလှောင်ရုံ Microsoft က Excel သို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်ဒေတာကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ Tableau dashboards ကိုခေါ်အပြင်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အလိုလိုသိသဘောထားအမြင်သို့ data တွေကိုပြောင်းလဲနေတဲ့အားဖြင့်အကောင့်သို့ခဏနားလညျမှုကိုကြာပါတယ်။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလအတွင်းသို့မဟုတ်နှစ်ဆန့်ကျင်သလိုစက္ကန့်သို့မဟုတ်မိနစ်ကြာနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင် interface ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ရန်ရိုးရှင်းတဲ့သုံးပြီးကုန်ပြီ။ အဘယ်ကြောင့် Tableau?
Tableau လမ်းပြီးနောက်ယူ, တစ်ဦးဆိုနိုင်ပါတယ်အတွက် data တွေကိုကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရိုးရှင်းသောရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဒေတာ speedier noteworthy အောင်, ဝေးလျော့နည်းတိုးတက်မှုအချိန်အတွက်ထွက်ပေါ်လာ။ လျှင်မြန်စွာစျေးကွက်မှထိန်းညှိဖို့အဆိုပါစွမ်းရည်ကြီးမားတဲ့အထက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ Tableau သင်အဆင်သင့်အနေအထားပေးခြင်း, သင့်ရဲ့ဒေတာကိုပိတ်ထားအခြေစိုက်အစာရှောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်မှုအပေါ်အခြေချရန်သင့်အားအာဏာ။
ဒေတာကိုစာမေးပွဲခက်ခဲဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲမြောက်မြားစွာဒေတာအမြင်အဆင့်ဆင့်ကလမ်းပါစေ။ သင့်ရဲ့ဒေတာအတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလေးစားမှု - Tableau အရေးကြီးသောအရှိဆုံးသောအရာကိုအပေါ်အလေးပေးချပြီး, အဓိပ္ပာယ်မဲ့အဆငျမပွမှေုနှင့်အတူယွင်းဘော်။ Tableau ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ရိုးရှင်းသော interface ကိုသင်ကအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒေတာကို virtuoso ဖြစ်သင့်ပါဘူး, ဆိုလိုတာကဘာမှပေမယ့်လေ့လာသင်ယူရန်ခက်ခဲသည်။
Big Data စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစွမ်းရည်များအတွက်ချီးကျူး, Tableau လွယ်ကူသောကြည့်ရှုအချက်အလက်များ၏မလိုလားအပ်သောအစီအမံကိုင်တွယ်စေသည်။ Tableau မသက်ဆိုင်သင့်ရဲ့ဒေတာဘယ်လောက်ကျယ်ပြန့်ခြင်း, မရရှိနိုင်ပါမည်သည့်ဒေတာကိုယ်စားပြုမှု software ကိုမှသာလွန်သင့်ရဲ့ဒေတာခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ကြဖို့အရေးကြီးနေသည်နိုင်ပါတယ်။
ဒေတာအားလုံးကို Tableau အတွက်ညီမျှသောလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ် interface ကိုပြုလုပ်လုပျထုံးလုပျနညျးအဆန်းဗီဇနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောသတင်းရင်းမြစ်များမှဒေတာများအနေနဲ့အလွန်အမင်းလျင်မြန်ဒေတာမော်တာများကထောကျခံခဲ့သည်။ သင်တို့သည်နောက်တဖန် Tableau ကအားလုံးကိုမကတည်းကဒေတာအမြင်ဆော့ဖ်ဝဲ, သင့်ရဲ့ဒေတာ၏မြင်ကွင်းထဲမှာအသုံးချနိုင်ဖို့ရာကျော်စိတ်ဖိစီးမှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါလည်းပြိုင်ဘက်ကျော် Tableau ရှိပါတယ်အရှိဆုံးတွေကမှားစရာနှစ်သက်သောရှုထောငျ့အံ့သြစရာဒေတာကိုယ်စားပြုမှုကိုဖန်တီးရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်ဖြတ်သွား, Tableau မဆိုဒေတာအမြင်ဆော့ဖ်ဝဲအရှိဆုံးသှေးဆောငျသေး utilitarian data တွေကိုကိုယ်စားပြုပေးထားပါတယ်။
Tableau ဘယ်သူ့ကိုမှရန်နားလည်မှုချက်ချင်းပွင့်လင်းအောင်နေဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးစက်မှုလုပ်ငန်းပြောင်းလဲသွားပြီ - က desktop ပေါ်မှာကိရိယာကို web အစီအစဉ်အိုင်ပက်သို့မဟုတ်ဆဲလ်ဖုန်းမှတဆင့်ဖွင့်ခြင်းရှိမရှိ။
Tableau ပင်ဆုံးဖြတ်ချက်၏ BI ဇာတ်စင်အဖြစ် Gartner မှမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထိုးထွင်းသိမြင်စက်မှုလုပ်ငန်းအထူးကုကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အခြေခံ Tableau Desktop ကို
Tableau Desktop ကိုအဆင့်မြင့်
1 ။ Tableau Desktop ကိုအခြေခံစည်းမျဉ်းသင်တန်း & လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
အတန်းအစားပေါ်မှာဤအစောပိုင်းအတွင်းအလယ်ဗဟို Desktop ကိုစွမ်းရည်လေ့လာပါ။ သငျသညျ Tableau အတွက် data တွေကိုစာမေးပွဲနှင့်အမြင်အာရုံအစီအစဉ်တစ်ခုသတိထားဖှငျ့နိဒါနျးကောက်များနှင့်ရှုမြင်ခြင်းနှင့်အသိဉာဏ် dashboards ဘယ်လိုလီဆယ်ထွက်တွက်ဆပါလိမ့်မယ်။
ဒီသင်တန်းကိုလမ်းအဆင့်အထိ Tableau client ကို၏အလယ်ဖို့သင်ယူသူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ အထူးပြုသို့မဟုတ်စနစ်တကျအုတ်မြစ်အနည်းငယ်သာသတိပြုပေးဆောင် - ဒါဟာဒေတာနဲ့အလုပ်လုပ်သူကိုမဆိုတစ်ဦးချင်းစီအဘို့ဖြစ်၏။ ဒီသင်တန်းကိုသင်ရှုပ်ထွေးကိုယ်စားပြုရန်လွယ်ကူခြင်းမှရွှေ့နှင့်အသိဉာဏ် dashboards ၌သူတို့ကိုခိုင်မာအောင်ဖို့ဘယ်လိုထွက်တွက်ဆဖို့ Tableau အတွက်အရေးပါစိတ်ကူးများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနားမလည်ခြင်းနှင့်အသုံးချကူညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားသည်။
လုံလောက်စွာထိရောက်သောသဘောထားအမြင်ဖြစ်စေခြင်းငှါ Tableau interface ကို / ကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်းကိုအသုံးချရန်။
အခြေခံနံပါတ်တစ်ခု juggling ခန့်မှန်းချက်, ထုံးစံစုဆောင်းခြင်းနှင့်အချိုးအစား, နေ့စွဲသင်္ချာနှင့် snappy စားပွဲပေါ်မှာ computing အပါအဝင်မရှိမဖြစ်ကိန်းဂဏန်းများလုပ်ပါ။
လက်ဝါးကပ်တိုင် tabs များ
သဘောထားအမြင်ဝေမျှဖို့ dashboards ထုတ်လုပ်။
Tableau Desktop ကိုဖွင့်ကိုပိုပြီးအထူးပြုဒြပ်စင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်သင့်ဒေတာတွေကိုသို့ထပ်မံ delve ။ သငျသညျတီထွင်စာမေးပွဲနှင့် dashboards စေကိန်းဂဏန်းများနှင့်ဂရပ်လုပျထုံးလုပျနညျးအဘို့အသုံးချ propelled လေ့လာသင်ယူရပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျ Impact ကိုယ်စားပြုအောင်တစ်ဦး propelled Tableau client ကိုဖြစ်လိုပါသလား ဒီသင်တန်းမှာတော့သငျသညျကိန်းဂဏန်းများသို့ဇောက်ချပါဝင်လာနဲ့စစ်မှန်တဲ့အခြေအနေများမှသူတို့ကိုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့် Tableau Desktop ကိုထဲကအများဆုံးရရန်မည်သို့ထွက်တွက်ဆပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်လာသောအခါစားပွဲတစ်ခု count က, ရှာဖွေသို့မဟုတ်လောဒမွို့သူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသည့်အခါအသုံးပြုသွားမည်နှင့်ခံရဖို့်၏သင်နားမလည်ကူညီပေးပါမည်။ သငျသညျသတိအဆင်သင့်ရနှင့်သင်၏ကိုယ်စားစီစဉ်ဖို့မည်သို့သဘောပေါက်နားလည်နိုင်စွမ်းတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်အချိန်ကိုဖြိုန်းကျင်အခြေအနေများ, ပထဝီနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ် data တွေကိုတဆင့်ပြုမိပါလိမ့်မည်။ ဒီသင်တန်းရဲ့အဆုံးမတိုင်မှီသင်စိတ်ကူးယဉ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် dashboards အောင်အဘို့အစွန်အဆောက်အအုံမဟာဗျူဟာများနှင့်ကွန်ပျူတာဖြတ်တောက်တစ်ဦးထက်သာလွန်လက်ကိုင်ရှိပါလိမ့်မယ်။
ဒါက propelled အဆင့်အတန်းအစားဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲကဒီအတန်းအစားမသွားမီ Tableau အတွက်ကွန်ပျူတာ၏အားကြီးသောသဘောပေါက်နားလည်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။ ဒါဟာခွဲ Desktop ကို III ကိုမသွားမီ Desktop ကိုငါနှင့် Desktop ကို II ကိုဒါမှမဟုတ်တန်းတူစိတ်ကူးများနှင့်စွမ်းရည် aced ပြီအလွန်အားသတ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဒေတာသို့အပိုအသိပညာတိုးပွားစေဖို့ propelled ကိန်းဂဏန်းများ Apply
တိုးတက်ရေးပါတီ Dashboard နည်းလမ်းများ Apply
Figure, parameters တွေကိုနှင့်စားပွဲခန့်မှန်းချက်စုံတွဲအသုံးချရန်
အမှုပေါင်းအသုံးချပုံမှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းရန် Tableau နည်းလမ်းများအသုံးချ
အများဆုံးအစွန်းရောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအဘို့သင့်သဘောထားအမြင်နှင့် dashboards စီစဉ်